Nzira yekuponeswa zvinoenderana neBhaibheri ▷ ➡️ Discover Online ▷ ➡️
Sei kuponeswa maererano neBhaibheri. Kana tichitaura nezve "kuponeswa," tiri kureva ruponeso rwemweya yedu. Kune chero muKristu, kuwana ruponeso kunofanirwa kuve chinangwa chikuru chehupenyu hwake. Nekudaro, vazhinji vanotenda kuve vanhu vakanaka vachazviita. Hapana chimwe chinowedzera kubva pachokwadi!
Kana iwe uchida kuziva nzira yekuponeswa, chakanakisa chatingaite ndeche Tarisa mhinduro muBhaibheri.
1 Sei kuponeswa maererano neBhaibheri: Chii chaunofanira kuita?
2 Ndingawana sei Ruponeso?
2.1 1. Ziva zvaunokanganisa uye unoda kuchinja
2.2 2. Teerera mirairo yaMwari
2.3 3. Tenda kuti Jesu akabhadhara mutengo wacho
2.4 4. Ziva Jesu semununuri wako
2.5 5. Ramba uri munzira yaIshe
Sei kuponeswa maererano neBhaibheri: Chii chaunofanira kuita?
Ndingaite sei kuti ndizive kana ini ndakaponeswa maererano nebhaibheri
Kuti uwane ruponeso, unoda kutanga pane zvese tenda kuti Jesu ndiye muponesi wako. Hapana chaungaite kuti uwane ruponeso, nekuti Mwari vanozvipa mahara. Iwe unongoda kugamuchira ichi chipo kubva pamoyo.
Kana iwe uchinyatsoda kuponeswa, iwe watove munzira kwayo. Izvi zvinoreva kuti Mwari ari kukushevedza. Jesu akatiudza kuti zvakaita semunhu ari kugogodza pasuo rako; kana ukaivhura uye ukaipinza mukati, unenge uri chikamu cheupenyu hwomumwe nezvose zvarinazvo.
Naizvozvo, zvese zvinodiwa kuti uwane Ruponeso ndizvo gamuchira Jesu mumoyo mako. Asi zvinorevei kugamuchira Jesu mumoyo mako?
Ndingawana sei Ruponeso?
1. Ziva zvaunokanganisa uye unoda kuchinja
Hapana munhu akakwana. Tose tinokanganisa. Ichi chikamu chehunhu hwedu hwevanhu, asi idambudziko guru. Izvo zvinhu zvakashata zvatinozviitira pachedu kuzvikuvadza isu nevaya vakatikomberedza. Bhaibheri rinotaura zvakare kuti kukanganisa kwedu kunounza rufu nekutongwa kusingaperi.
Kana iwe uine dambudziko, zvakajairika kuti iwe unoda kuigadzirisa. Iyo Nhanho yekutanga muruponeso kuziva kuti une hurema, kuti unzwe kusagadzikana uye unoda kurarama zvakasiyana. Izvi zvinonzi kutendeuka.
2. Teerera mirairo yaMwari
Bhaibheri rinotaura kuti iwe wakasikwa nenzira inokosha naMwari. Anokuda uye haadi kukuona uchitambura. Kunyangwe zvakadaro, uye kunyangwe uine simba rese, Mwari vanokutendera kuti usarudze kuti unomuda here kana kuti kwete. Hazvikumanikidzi kuteerera. Asi ukakanganisa unorwadzisa Mwari.
Nekuti ini handidi rufu pamusoro paiye unofa, ndizvo zvinotaura Ishe Jehovha; tendeuka ugorarama.
Mwari ndivo vakaita mirau yekuti zvikunakire. Paunoteerera, unowana nzira iri nani yekurarama. Asi kana iwe ukasateerera, zvinounza dambudziko rakawanda mukati nyika. Naizvozvo Mwari anoshandisa chirango kudzorera Kururamisira. Asi Mwari haafarire kuranga uye anoda kuregerera.
3. Tenda kuti Jesu akabhadhara mutengo wacho
Dambudziko nderekuti iwe unofanirwa kuisa chirango. Mabasa akanaka iwe aunoita haatsigire iyo yakaipa. Semuenzaniso, mhondi haigoni kutsiva hupenyu hwayakatora nekuponesa vamwe. Chikwereti chakanyanyisa kubhadhara muhupenyu huno. Mhedzisiro yezviito zvako haigone kuverenga, saka chirango chisingaperi.
Nekuti chero munhu anochengeta mutemo wese, asi otadza mune imwechete, ane mhosva kune ese. Nekuti iye wakati: Usaita upombwe, ndokutiwo: Usauraya. Zvino kana usingaiti upombwe asi uchiuraya, watove mudariki wemutemo.
Jakobho 2: 10-11
Asi Mwari vakasarudza kukubhadharira faindiMwari akauya pasi pano semunhu, anonzi Jesu, uye akapfuura nepazvose zvatakatarisana nazvo, asi haana kumbotadza. Ipapo akazvipira kufa panzvimbo pedu, pamuchinjikwa. Sezvo Mwari akakwana uye asingagumi, chibayiro chaAkaita chaivewo chakakwana uye chisingaperi. Akabhadhara muripo wezvivi zvose.
Uye nenzira yakasimbiswa kuti vanhu vafe kamwe chete, uye mushure meizvi kutongwaSaizvozvovo Kirisito akabayirwa kamwe chete kuti atakure zvivi zvevazhinji; uye achaonekwa kechipiri, asina hukama nechivi, kuti aponese avo vakamumirira.
VaHebheru 9: 27-28
4. Ziva Jesu semununuri wako
Zvino izvo muripo wechivi wabhadharwa, Mwari anopa ruponeso rwemahara. Asi zvakadaro, haimanikidzi munhu kugamuchira. Chete avo vanotenda muna Jesu uye vagomugamuchira semuponesi wavo, vachitendeuka pazvivi zvavo, vachaponeswa.
Kugamuchira Jesu semuponesi wako kuri kuvhura musuwo wekuti apinde muhupenyu hwako. Zvinoita sekunge iwe unofa uye ukapihwa hupenyu hutsva, wakasununguka kubva mukutongwa. Zvinoreva kuzvipira kutevera Jesu uye kumuraramira. Ipapo hupenyu hwako hunozochinja!
5. Ramba uri munzira yaIshe
Kana iwe waita sarudzo yekutenda muna Jesu, makorokoto! Kune mudenga kudenga kwako. Asi hazviperere pano. Iye zvino hupenyu hwako huchave hwakasiyana. Bhaibheri rinofananidza ruponeso nekuzvarwa kechipiri. Iye zvino unoda kukura.
Saka ndinokuudza kuti kune mufaro pamberi pevatumwa vaMwari pamusoro pemutadzi anopfidza.
Ruponeso harungori sarudzo yaunotora rimwe zuva woperera ipapo. Iyi inzira itsva yekurarama naJesu. Taura kuna Mwari (munamato), verenga Bhaibheri, uye edza kusangana nevamwe vatendi. Uye Mwari anogara anemi, nariini nariini.
Izvi ndizvo zvazviri! Ndinovimba unonzwisisa kuponeswa maererano neBhaibheri. Isu tinoziva kuti iwo mugwagwa wakaoma, zvisinei, mubairo ruponeso rwekusingaperi.
Kana ikozvino iwe uchida kuziva chii chiri chinangwa chehupenyu maererano nebhaibheri, ramba uchivhura Ziva.online.